UGREEN HiTune X6: ruzha-kudzima mahedhifoni engori €40,49 | ndinobva ku mac
UGREEN HiTune X6: ruzha-kudzima mahedhifoni kwe40,49 chete
Ignatius Room | | dzakawanda
Paunenge uchitenga mahedhifoni asina waya, nhamba yezvisarudzo zviripo parizvino pamusika iri kumusoro kwazvo, chero zvatinosarudza zvisingapfuuri nekutenga chero emhando dzakasiyana dze AirPods dzinoitwa neApple kwatiri.
Kana homwe yako isingaibvumire kana wakaneta nekurasikirwa neAirPods yako, kubva ku iPhone Nhau tinokupa inonakidza sarudzo. Ndiri kutaura nezve UGREEN HiTune X6, maearphone ekudzima ruzha Chii chatingawana paAmazon ye40,49 € kana tikatora mukana wekupihwa watinokuratidza muchinyorwa chino kubva muna Ndira 17 kusvika 23 wemwedzi uno, sezvo mutengo wayo wenguva dzose uri ma-euro 59,90.
Kana iwe uchida kuziva rumwe ruzivo nezve mugadziri uyu, ndinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga.
1 UGREEN ndiani?
2 Izvo UGREEN HiTune X6 inotipa
2.1 Kushanda ruzha kudzima
2.2 6 maikorofoni yekukurukurirana kwakajeka
2.3 Yakaderera latency
2.4 MAKARALI USB 5.1
2.5 nyore kubatanidza
2.6 Maawa makumi maviri nematanhatu ekutamba nekesi yekuchaja
2.7 Bata zvinodzora
2.8 Mvura inopesana
3 Chii chiri mubhokisi
4 Nakidzwa nekupihwa
Ugreen ndeimwe ye vagadziri vezvigadzirwa zvekare pamusika, mugadziri anotipa nhamba huru yetambo, majaja, maHUB, iPhone mounts, adapters emarudzi ose ekubatanidza ... zvigadzirwa izvo zvinotengesa munyika dzinopfuura zana uye nevatengi vanopfuura mamiriyoni makumi mana pasi rose.
Kwechinguva ikozvino, iri kubhejawo pamahedhifoni asina waya, musika unoramba uchikura uye pese paunobatanidza vakwikwidzi vatsva.
Iine HiTune X6 nyowani, mugadziri uyu anowedzera kuwedzera huwandu hwayo hwemahedhifoni asina waya iyo yaakapa kusvika ikozvino. Asi, nechinhu chakakosha chitsva, sezvo iyi ndiyo yekutanga modhi yemugadziri uyu inosanganisira inoshingaira kudzima hurongwa.
Nekuda kweiyi ruzha kudzima system, tinogona kuzvitsaura kubva kune zvakatipoteredza zvachose pasina nzeve dzedu kukanganiswa nekumanikidzwa kukwidza vhoriyamu kuti tiwane kuzviparadzanisa isu kwatinotsvaka.
Izvo UGREEN HiTune X6 inotipa
Kushanda ruzha kudzima
Iyo UGREEN HiTune X6 mahedhifoni ane kushingaira kudzima ruzha, kungofanana neApple's AirPods Pro.
Nekuda kwekuita ruzha kudzima, iyo HiTune X6 vanokwanisa kudzima chero ruzha rwekunze izvo zvinozotitendera kuti tizviparadzanise zvachose kubva kunharaunda yedu tichidzivisa kukwidza inzwi, izvo zvinotibvumira kunakidzwa nemimhanzi yedu yatinoda mune chero nharaunda.
Aya mahedhifoni matsva eUGREEN anosanganisira 10-millimeter ine simba mutyairi ane DLC diaphragm inobvumira kune inonzwika ruzha. kudzivisa kukanganiswa kwechiratidzo zvose pakakwirira uye pasi pasi.
6 maikorofoni yekukurukurirana kwakajeka
Mahedhifoni anodzima ruzha anosimudza ruzha rwekunze kuti udzima kuti ukwanise bvisa panzira yedu yenzeve. Iyo UGREEN HiTune X6 inosanganisa maikorofoni matanhatu pamwe chete, matatu maikorofoni pane imwe neimwe earphone.
Aya maikorofoni anochengeta paradzanisa ruzha kubva zvakatipoteredza munguva chaiyo kuburitsa izwi remunhu rakajeka nekudzvanyirira 90% yeruzha rwe ambient kuti utipe yakakwira mhando yekufona kana ichienzaniswa nemamwe mahedhifoni asina waya pasina tekinoroji yekudzima ruzha.
Wireless mahedhifoni haana kumbobvira aonekwa seyakanaka sarudzo yekunakidzwa nemamuvhi kana mitambo yemavhidhiyo, nekuda kwe latency. Iyo UGREEN HiTune X6 inosanganisira mutambo wemutambo unopa latency ye50 ms.
Kutenda kune iyi low latency, hatizocherechedzi chero rudzi rwekunonoka muodhiyo tichinakidzwa nemitambo yedu yatinofarira kana mabhaisikopo kubva kuchishandiso chedu, ingave iri iPhone, iPad, Mac, iPod touch...
Kugadzirisa kutamisa odhiyo, UGREEN inoshandisa iyo 5.1 version yeBluetooth, iyo inoibvumira kupa yakagadzikana, inokurumidza uye inoenderana isina waya yekubatanidza nechero iOS uye Android mudziyo.
Uyewo, inosanganisira rutsigiro rweACC neSBC kuunza yakadzama yakadzama bass uye kazhinji yepamusoro-mhando ruzha. Chekupedzisira asi chisiri chidiki, chinofanira kuyeukwa kuti iyi vhezheni yebluetooth inoshandisa kunyange shoma simba kupfuura shanduro dzakapfuura.
Kana tangobatanidza iyo UGREEN HiTune X6 kune yedu iPhone, iPad kana Mac, pese patinovhura kesi yekuchaja, ivo vanozobatana otomatiki kune yekupedzisira paired mudziyo.
Maawa makumi maviri nematanhatu ekutamba nekesi yekuchaja
Mahedhifoni emugadziri uyu ane a kuzvimiririra kwemaawa matanhatu ekutamba pasina kushandisa kudzima ruzha. Kana tikaimisa, maererano nemugadziri, kuzvitonga kunoderedzwa nemaminitsi makumi matatu chete, nekuzvimiririra kwemaawa 30.
Inobatanidza a kutsanya kuchaja system izvo zvinotibvumira kuwedzera awa yekushandiswa kweHiTune X6 nemaminitsi gumi chete ekuchaja. Kana tisiri kukurumidza, muawa imwe chete nehafu, tinogona kuvapa mhosva yakakwana. Kesi yekuchaja inotora maawa maviri kuti inyatsochaja.
Iyo UGREEN HiTine X6 haisanganisi tsigiro yekuchaja isina waya, saka isu tichamanikidzwa kushandisa USB-C tambo inosanganisirwa mubhokisi kuita kudaro.
Through the kubata pasi iyo inosanganisira HiTune X6, tinokwanisa kumisa nekudzima kudzima ruzha, kumbomira uye kuridza mimhanzi, simudza uye kutora runhare, enda kune rinotevera kana rwiyo rwapfuura uye mutsa mubatsiri wezwi.
Kana iwe uchitsvaga mahedhifoni ekudzidzira mitambo, mhinduro inopihwa neUGREEN inoshanda chaizvo kubvira inosanganisira IPX5 certification
Chii chiri mubhokisi
Iyo UGREEN HiTune X6 bhokisi inosanganisira masaizi matatu ezvivhariso zvenzeve kuti zvikwane panzeve yevashandisi vese, mapulagi akagadzirwa nesilicone anopa kubata kwakachengeteka uye anovadzivirira kubva pakudonha mune chero kamwe kamwe kufamba.
Pamwe chete nemaearbuds, yekuchaja kesi, uye matatu saizi yematampon, zvakare inosanganisira 50-centimita USB-C tambo mubhokisi kuzvitakura uye yekare mushandisi bhuku kwatinoratidzwa maitiro ekuabatanidza kune yedu mudziyo.
El mutengo wakajairika weUGREEN HiTune X6 i59,99 euros. Asi, isu tinotora mukana weiyo coupon yekuderedzwa inosanganisirwa uye iyo kuponi FIGRH9JB usati waita kubhadhara, kupera kweiyi ruzha kudzima mahedhifoni inogona kutengeswa ye 40,49 Euro.
Kuti utore mukana wekupihwa, unofanirwa kushandisa coupon (iri papeji yechigadzirwa) uye kodhi yatakaratidza mundima yapfuura.
Kusimudzirwa uku chete inowanikwa kubva Ndira 17 kusvika 23. Iwe unogona kutora mukana weichi chinopihwa uye utore mamwe mahedhifoni-anodzima mahedhifoni nemutengo wakafanira kuburikidza ne next link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » UGREEN HiTune X6: ruzha-kudzima mahedhifoni kwe40,49 chete
Iyo AirPods Max ye415 euros chete paAmazon
Apple yekuvhara loop paApple Silicon mukupera kwegore rino